प्राधिकरण – Himalaya Television
३ वैशाख २०७८ काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न स्वीकृति पाएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा एक्सचेञ्ज मार्केटबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिइएको जानकारी प्राधिकरणलाई...
वायुसेवा कम्पनीहरुलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले दियो यस्तो चेतावनी
२६ माघ २०७७ काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ११ वटा वायुसेवा कम्पनीहरुलाई बक्यौता रकम बुझाउन ३० दिने म्याद दिएको छ । प्राधिकरणले आज जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा ३० दिनभित्रमा उक्त रकम र नियमानुसार लाग्ने विलम्ब शुल्कसमेत बुझाई आफ्नो...
प्राधिकरणले पुनः शुरु गर्‍यो वितरण प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता
२० माघ २०७७ काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण र सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्दै कर्मचारीलाई सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ पुनः कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्न थालेको छ । प्राधिकरणले त्यसलाई संस्थागत सुधार एवं सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारीबोधका रुपमा समेत...
देशमा फेरि लोडसेडिङ शुरु भएकै हो ? किन गइरहेछ बत्ती ? के भन्छ विद्यूत प्राधिकरण ? (भिडियोसहित)
१४ पुस २०७७ काठमाडौं । पछिल्लो समय झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने र लामो समय नआउने क्रम बढ्दै गएको छ । बत्ती जानेक्रम बढ्दै गएपछि नागरिक फेरि लोडसेडिङ शुरु भएको हो कि भनेर चिन्तित छन् । तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने...
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
२१ मंसिर, २०७७ काठमाडौं । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्य अवधि एक वर्ष थप गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंसिर १५ गते बसेको बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्षका लागि थप गरेको हो । भूकम्पबाट प्रभावित...
२४ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको छ । अर्को व्यवस्था नभइन्जेलसम्मका लागि मन्त्रालयले शाक्यलाई निमित्त प्रमुख तोकेको हो । शाक्यले आजै पदबाहाली गर्नुभएको छ । पदबहाली गर्दै शाक्यले...
दशैंका कारण बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणलाई दैनिक ३ करोड नोक्सानी
१२ कात्तिक, २०७७ काठमाडौं । दशैंका कारण बिजुली खेर जाँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक करिब ३ करोड रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरिरहेको छ । हाल दैनिक ३० लाख युनिटभन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको छ । प्राधिकारणको भारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेशबहादुर भट्टराईका...